प्रधानमन्त्रीलाई आत्महत्याको सुझाव , एकपटक सबैले पढ्नैपर्ने.... - info4nepal
प्रधानमन्त्रीलाई आत्महत्याको सुझाव , एकपटक सबैले पढ्नैपर्ने….
हामीमध्ये धेरैले पटक पटक मदन भण्डारी बाँचेका भए यस्तो हुँदैनथ्यो, वी पी केही समय प्रधानमन्त्री बन्न पाएका भए त्यस्तो हुँदैनथ्यो, वीरेन्द्र नै बाँचिरहेका भए उस्तो हुँदैनथ्यो भन्छौँ ।
ती शृंखलाहरुमा के पी ओली बाँचेका भए यस्तो हुन्नथ्यो भन्न पाइन्न अब किनकि अरु सबैले नपाएको चान्स के पी ओलीले पाएका छन् । उनले लगभग आशा हराएको पार्टीको शीर्षस्थ जिम्मेवारी पनि पाए । उनले लगभग आशा हराएको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि पाए तर फेरि ९ महिनाजति पछि त्यो पद गुमाएर फेरि पनि दोहोर्यार सोही पद पाए । त्यति मात्र होइन, उनले नाफाको जिन्दगी पनि पाए । रोगले समेत हार्यो । अब पनि उनले केही नगरेमा भण्डारी, वी पी, वीरेन्द्रलेजस्तो “बाँचेका भए” भन्ने साहनुभुति पाउने छैनन् । उनमै क्षमता रहेनछ भन्ने पुष्टि हुनेछ । उनले माफी पाउने छैनन् । अरुले पाएको त्यो भवितव्यको वैकल्पिक सुविधा पनि उनलाई दिन मिल्दैन ।
एउटा खेलाडी परफरमेन्सको समय बिताउँदै जान्छ, खेल चाहिँ राम्रो खेल्दैन तर ” समय खेर फाल्नु हुन्न, राम्रो खेल्नुपर्छ, गीत गाएर मात्र हुँदैन, अहिले नै राम्रो खेलेँ भने जित्छु, योजना बनाएर खेलेँ भने राम्रो गर्छु, खेलौँ राम्रोसँग खेलौँ ” मात्र भनिरहन्छ भने के बुझिन्छ ?
त्यसैगरी एउटा विद्यार्थीले परीक्षा हलमा बसेर ” राम्रो लेख्नुपर्छ, लेख्न ढिला गर्नु हुन्न, अहिले नै राम्रो लेखेँ भने राम्रो परिणाम आउँछ , लेख्न नरोकौँ, तिब्र गतिमा लेखौँ ” भन्छ । अरुलाई सुनाएर, छेउछाउमा भएकाहरुलाई हामी सबैले लेख्न थाल्यौँ भने क्या राम्रो हुन्छ भनिरहन्छ तर आफूले लेख्नु पर्ने काम गर्दैन भने के हुन्छ त्यसको अर्थ ? उसले खेल र परीक्षा के हो भनेरै नबुझेको वा राम्रो गर्न नसकेर बुझ् पचाएको, ज्ञानी बन्ने नाटक मात्र गरेका बुझिन्न ?
त्यो खेलाडी र विद्यार्थीको त्यो कुरा सुनेर रुने वा हास्ने बाहेक के गर्न सकिन्छ ? खेल्नुपर्ने उसले हो । हेर्नेले होइन । लेख्नु पर्ने पनि उसैले अरुले होइन । आफू गर्नु पर्ने काम अरुलाई “गरौँ गरौँ, ढिलो गर्नु हुन्न” मात्र भनिरहन्छ
प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको पछिल्लो धरहराको भग्न ठुटोमुनि उभिएर त्यही खेलाडी र विद्यार्थीले भनेजस्तो उदेक लाग्दो भाषण सुनेर रुनु कि हास्नुजस्तो भयो । उहाँको भाषण हेर्नुस् :
मैले २०७२ साल फागुन ४ गते आह्वान गरेको थिएँ, मै बनाउँछु मेरो धरहरा, हरेक नेपालीको नारा । यो हरेक नेपालीको नारा हुनुपर्छ मै बनाउँछु मेरो धरहरा । के गर्न सक्छौं हामी त्यो गरौं । मै बनाउँछु मेरो धरहरा ।
यसका निम्ति कोदालो बोकेर आउनुपर्छ भने म कोदालो बोकेर आउँछु । ईंटा बोक्न आउनुपर्छ भने खर्पन लिएर आउनुपर्छ कि डोको लिएर म पनि आउँछु । अथवा मैले सक्ने अरु योगदान गर्नुपर्छ भने त्यो पनि गर्छु । त्यसकारण मै बनाउँछु मेरो धरहरा ।
तरिकासँगले हामी यहाँ भएका मान्छेहरुले थाल्ने हो भने धरहराको निर्माण कार्य अगाडि बढ्छ । तर, अव्यवस्थित ढंगले त्यत्तिकै थालेर हुँदैन, व्यवस्थित ढंगले थाल्नुपर्छ । म आग्रह गर्न चाहन्छु अब पुनर्निमार्णको कामलाई तीव्रता दिऔं ।
धरहरा सकेसम्म छिटो निर्माण गरौं । रानीपोखरी सकेसम्म छिटो निर्माण गरौं । काष्ठमण्डप तुरुन्त निर्माण गरौं । बसन्तपुर तीव्र गतिका साथ पुनर्निर्माण गरौं ।
अब पर्खिने समय छैन हामीसँग । हामीले देशलाई आर्थिक उन्नतकिो दिशामा तीब्रताका साथ लानु छ । भत्केका संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको गीतमात्रै बस्ने हो भने बाँकी पुनर्निर्माण कहिले गर्छौं रु समृद्धि कहिले गर्छौं रु त्यसकारण हामीसँग अल्मलिने, पर्खिने समय छैन ।
अब उहाँको त्यो भाषणमाथिको टिप्पणी, मनोगत होइन वस्तुगत । कोष्ठकभित्र राखिएको छ :
मैले २०७२ साल फागुन ४ गते आह्वान गरेको थिएँ, (सही भन्नुभयो )। मै बनाउँछु मेरो धरहरा, हरेक नेपालीको नारा । यो हरेक नेपालीको नारा हुनुपर्छ मै बनाउँछु मेरो धरहरा(त्यसैले नारा मात्र बनिरह्यो )। के गर्न सक्छौं हामी त्यो गरौं(तपार्इँ शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हामी के केही सक्नुहुन्न ?)। मै बनाउँछु मेरो धरहरा ।
यसका निम्ति कोदालो बोकेर आउनुपर्छ भने म कोदालो बोकेर आउँछु (कोदालो बोकेर आएर धरहरा बन्छ रु खाल्डो मात्र बन्छ ) । ईंटा बोक्न आउनुपर्छ भने खर्पन लिएर आउनुपर्छ कि डोको लिएर म पनि आउँछु । अथवा मैले सक्ने अरु योगदान गर्नुपर्छ भने (‘गर्नुपर्छ भने’ भनेको के हो ? थाहा छैन ? तपार्इँले नै हो गर्ने ? कि बिर्सनुभयो म प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने ? तपार्इँ कुनै बच्चाको खेल खेल्दै हुनुहुन्न, प्रधानमन्त्री हो तपाईँ हुन त पटक पटक प्रधानमन्त्री बन्ने तर काम केही नगरी कुरा मात्र गर्ने देशमा बच्चाको खेल नै लाग्दो प्रधानमन्त्री बन्नु पनि ) त्यो पनि गर्छु । त्यसकारण मै बनाउँछु मेरो धरहरा ।
तरिकासँगले हामी यहाँ भएका मान्छेहरुले थाल्ने हो भने धरहराको निर्माण कार्य अगाडि बढ्छ । (भाषण सुन्न आएका मान्छेले तत्कालै ठाउँको ठाउँ इट्टा बोक्न थालेर बन्दैन, योजना हुनुपर्छ थाहा छैन ? तरिकासँग किन नबनाएको त र ? कसले रोकेको छ ?) तर, अव्यवस्थित ढंगले त्यत्तिकै थालेर हुँदैन, व्यवस्थित ढंगले थाल्नुपर्छ ।(अनि गर्नु नि त ) म आग्रह गर्न चाहन्छु अब पुनर्निमार्णको कामलाई तीव्रता दिऔं ।(तिब्रता दिन आग्रह कसलाई गर्ने आफैँ शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएपछि ? )
धरहरा सकेसम्म छिटो निर्माण गरौं (गर्नु पर्ने भाषण सुन्नेले ? कसलाई गरौँ भनिएको हो र ? ) रानीपोखरी सकेसम्म छिटो निर्माण गरौं (छिटो निर्माण गर्न कसले रोकेको छ ? गर्नु नि ) काष्ठमण्डप तुरुन्त निर्माण गरौं (गर्नुस् न त अनुमति माग्नुपर्छ ? ) । बसन्तपुर तीव्र गतिका साथ पुनर्निर्माण गरौं (अरे बाबा भद्रो कि हेर्नु पर्यो त ? गर्नुस् न कुरा नगरी )।
अब पर्खिने समय छैन हामीसँग (कसलाई किन पर्खनु भएको त )। हामीले देशलाई आर्थिक उन्नतकिो दिशामा तीब्रताका साथ लानु छ (सही भन्नु भयो )। भत्केका संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको गीतमात्रै बस्ने हो भने बाँकी पुनर्निर्माण कहिले गर्छौं (अनि गीत मात्र किन गाइरहनु भएको हो ?) समृद्धि कहिले गर्छौं ? त्यसकारण हामीसँग अल्मलिने, पर्खिने समय छैन (तपार्इँ किन गीत मात्र गाएर अल्मलिइरहनु भएको छ बुझ्न सकिएको छैन)।
ओलीलाई कुन सल्लाहकारले सुझायो यस्तो भाषण ? आफ्नो काम के हो ? मैले बोल्ने सीमा के हो ? आफूले योजना ल्याएर जनतालाई सुनाउनु पर्नेमा भाषण सुन्न भेला भएका जनतालाई तत्कालै सबै कुटो कोदालो बोकेर धरहरा बनाउन थालौँ , अहिले नै यहाँ भेला भएका सबैले शुरु गर्यौँ भने बन्छ धरहरा भनेर दिवालियापन देखाउनु हुन्छ ? कि उहाँले योजना लिएर आउने हो ? नसकेमा क्षमाप्रार्थी छु,ढिलो भएको छ । हामी चाँडै योजना ल्याउने छौँ भन्नु पर्ने हो मैले केही गर्नु भए म गर्न तयार छु,तपार्इँ पनि खर्पन बोक्नुस् भन्ने हो ?
आफ्नो प्रधानमन्त्रीले यस्तो बेतुकका कुरा गरेको सुनेर उनलाई केही गर्न नसक्ने हो भने आत्महत्या गर्नुस् भन्ने सुझाव दिन मन लाग्छ । आफ्नो देशको प्रधानमन्त्रीले आफू प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने भुलेर आफूले गर्नु पर्ने काम आफैै नगरी छिटो गरौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु भनेको सुन्दा आफू पनि आत्महत्या गर्न मन लाग्छ र प्रधानमन्त्रीलाई पनि आत्महत्या गर्न सुझाव दिन मन लाग्छ । तलब भत्ता आफूले लिएर कुनै योजना सार्वजनिक नगरी यहाँ भेला भएका सबैले धरहरा बनाउन तिब्रगतिमा काम शुरु गर्न आग्रह गर्छु भन्नु भनेको प्रधानमन्त्रीको तहबाट आत्महत्या गर्नु नै हो ।
हत्यारा जोगाउने गृहमन्त्रीको तुरुन्त राजिनामा माग गर्दै कांग्रेस निकट महिल्ला संघ
ranjan December 10, 2018
गायिका ज्योति मगरको तीज गीत ‘केरा काटेर
को बन्नुपर्छ अब नेपाली कांग्रेसको सभापति ? तस्बिरमा क्लिक गरेर कमेन्ट गर्नुहोस तपाइको बिचार
ranjan December 17, 2018
नारी इज्जतमाथि संगीन प्रश्न उठाउने दुर्गा प्रसाईलाई एक बर्ष जेल सजाय हुने !
भुकम्प पछि नया जीवन पायेका यी बालक अहिले येस्ता छन …. एक शेयर सबैले
ranjan April 25, 2018
देशभित्र रोजगारी सृजना गर्नुको साटो उल्टै ५८०० तिरेर खाडी मुलुक जाने व्यवस्था गर्दै, युवाहरुलाई खाडी जान प्रोत्साहन गर्दै सरकार
ranjan October 30, 2018